Raysal wasaare Abiy Ahmed oo Sheegay Inay Ciidamada Amaanku Fashiliyiin Inqilaab lagu Burburinayey Itoobiya | Mandheera News
Raysal wasaare Abiy Ahmed oo Sheegay Inay Ciidamada Amaanku Fashiliyiin Inqilaab lagu Burburinayey Itoobiya
July 3, 2020 - Written by admin
Adis ababa(Mandheeranews)Ra’isulwasaaraha Ethiopia ayaa sheegay in ciidamada amaanka dalku fashiliyeen qorshe la doonayay in Ethiopia lagaga rido dagaal sokeeye. Abiy Ahmed ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada amaanka, madaxda garsoorka, xubno dawlada ah iyo madaxda maamulka Oromada.
Abiy ayaa sheegay inla qabtay kuwii horinayay colaada isaga oo amaan kala dul dhacay hay’adaha ciidamada amaanka. Wuxuu sheegay in sharciga la hor keenayo dadka falka ku jiray iyo kuwii soo maleegayba.
Ra’isulwasaaraha, oo uu ETV soo xigtay, ayaa tibaaxay in dadkii dawladu saamaxday iyo kuwii lagu martiqaaday inay dalka kusoo noqdaan si ay nabada uga shaqeeyaan ay horinayaan colaad sokeeye. Wuxuu intaa ku daray, in dadkani adeegsanayaan warbaahinta, baraha bulshada iyo dhaqaale.
Abiy Ahmed ma soo qaadin magaacda ururo iyo shakhsiyo, laakiin waxaa iska muuqata inuu u jeedo Jawar Mohammed iyo qaar kamid ah taageerayaasha oo la qabtay. Waxaa kale oo la qabtay xubno ka tirsan ururka OFC iyo madaxii ururka Balderas.
Ra’isulwasaaraha ayaa xusay in aan cidna jidh-dil iyo caqaab lagula kicnin balse ayna cidna sharciga ka sarayn, sidadarteedna hay’adaha garsoorku shaqadooda qabsanayaan. Waxaa kale oo uu xusay in xukuumada dadaalkeeda galin doonto in qulqulatooyinkan oo kale ayna dib u dhicin.
Abiy ayaa, sidoo kale, ammanay dadweynaha iyo madaxda dhaqanka oo uu sheegay inay ka qayb qaateen dadaadlka dawlada.
Xukuumada ayaa maanta sheegtay inla xidhay xafiiskii warbaahinta OMN ee Jawar Mohammed lahaa iyada oo lagu eedeeyay hurinta colaado salka ku haya diin iyo isirka. Waxaa kale oo la baadhaya 2 warbaahin oo kala ah Asrat oo lagu baahiyo afka Axmaariga iyo Dimtze Weyemane oo lagu baahiyo afka Tigreya (Tigreega).
Dhanka kale, hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa walaac ka muujisay qulqulatooyinkii 3 maalmood ee la soo dhaafay dalka ka dhacay. Hay’ada ayaa xustay in qulqulatooyinku u muuqdeen kuwa qowmi ah. Waxay ugu yeedhay dhalinyarada inay ka fogaadan qulqulatooyinka salka ku haya isirka. Hay’ada ayaa ciidamada dawlada ugu baaqday inay taxadar muujiyaan islamarkaana ayna adeegsan awood xad dhaaf ah.
Sidoo kale, hay’ada ayaa walaac ka muujisay adeega internet-ka ee xukuumadu jartay. Waxay ku baaqday in dib loo furo adeega iyada oo goyntiisa ku tilmaantay mid lid ku ah xoriyada helitaanka waraka iyo xogaha loo baahan yahay.
✍️ Abdul Hirad